E-commerce - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Newgenapps i e-commerce web solutions kambani inopa yakanakisa yakagadziriswa website web design, kuvandudza, uye injini yekutsvaga. Nhengo dzechikwata chedu dzakazvipira dzinotungamira indasitiri mukugadzira yakagadziriswa pamusoro penzvimbo dzewebhu dzinokurudzira bhizinesi rakabudirira uye kutengesa kwepamhepo. yega yega webhusaiti yatinotora inovandudzwa nekushandisa mupfungwa zvichiita kuti ruzivo rwekufamba-famba ruve nyore. Mutengi wedu anosvika pazvavanogona kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi online.
Newgenapps iyo e-commerce web mhinduro kambani inopa yakanakisa mune yakagadziridzwa webhusaiti dhizaini, kuvandudza, uye yekutsvagisa injini. Nhengo dzechikwata chedu dzakazvipira dzinotungamira indasitiri mukugadzira yakagadziriswa pamusoro penzvimbo dzewebhu dzinokurudzira bhizinesi rakabudirira uye kutengesa kwepamhepo. yega yega webhusaiti yatinotora inovandudzwa nekushandisa mupfungwa zvichiita kuti ruzivo rwekufamba-famba ruve nyore. Mutengi wedu anosvika pazvavanogona kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi online.
Zvinotevera ndizvo zvakakosha mabhenefiti eedu e-commerce webhu dhizaini
1. Zvikumbiro pane Yakabatanidzwa ruzivo ruzivo uye bhizinesi
2. Tsika dzakagadzirwa uye dzakagadziriswa mawebhusaiti
3. Kubatanidzwa pakati pekutarisira ruzivo, kugadzirisa online kutengeserana uye business intelligence mafomu
4. Kushanda kwevashandisi vemukati nekunze
5. Nharembozha uye piritsi rakagadziridzwa dhizaini
6. Easy manejimendi yezviri mukati, zvigadzirwa, maodha, nezvimwe.